Izindaba - Kwenzekani kuma-smartwatches uma ethinta amanzi kakhulu?
Iyini incazelo yewashi elihlakaniphile elinokungenwa kwamanzi? Kungenzeka yini ukuthi uhlale uthintana namanzi isikhathi eside?
Eqinisweni, ibanga elingangeni uthuli nelingenamanzi lemikhiqizo kagesi ngokuvamile liboniswa yi-IP. Ngokusho kobuchwepheshe obungenamanzi nenqubo yokukhiqiza, imikhiqizo yeHengmei Technology ngokuyisisekelo ingafinyelela ezingeni le-IP67 ne-IP68 engenamanzi. Ngemuva kokuhlolwa kwemboni, imikhiqizo ikhombisa ukusebenza okungangenwa ngamanzi endaweni ethile, engadlala indima yokuvikela ekucwiliseni okufishane.
Yini i-IPXX Manzi
I-IP68 yizinga eliphakeme kakhulu lebanga elingangeni izintuli nelingenamanzi. Ungayihlola kanjani ukusebenza kweShell okuqinile nokungangenwa manzi, ikakhulukazi ukubona i-IPXX ngemuva kwamadijithi amabili XX.
I-X yokuqala ileveli engenalo uthuli, kusuka ku-0 kuye ku-6, ezingeni eliphakeme kube yi-6.
I-X yesibili isilinganiso esingenamanzi, esukela ku-0 kuye ku-8, kanti isilinganiso esiphezulu siyi-8.
IPX1 amanzi ewela ezindlini ngaphandle kokusebenza
IPX2 awunamthelela lapho indlu ithambekele kuma-15 degrees
IPX3 amanzi noma imvula yehla kusuka kuma-degree angama-60 ayinamphumela
IPX4 uketshezi kunoma iyiphi indlela eya kugobolondo akunamthelela
IPX5 ingahlanzwa ngamanzi ngaphandle kokulimala
IPX6 ingasetshenziswa kule ndlwana, imvelo yamagagasi amakhulu
IPX7 ingahlala emanzini aze afike kumitha elilodwa ukujula imizuzu engama-30
IPX8 ingahlala emanzini aze afinyelele kumamitha amabili ukujula imizuzu engama-30
Lokhu kungumkhiqizo wenkampani yethu, igama lomkhiqizo: H68. Ngemuva kokuhlolwa ngonjiniyela nabahloli bethu, ukusetshenziswa kwewashi akuzange kuthinteke ngokufaka emanzini ubusuku obubodwa. Ikhono elingenamanzi ku-lever.
Kungani kunganconyelwa imvula eshisayo
Endabeni yokugeza, udinga ukugeza okushisayo noma okugeza okubandayo.
Ngokuvamile, kunzima ngemikhiqizo ye-elekthronikhi esebenza ngamanzi ukuthi ingene emanzini lapho igeza ngamanzi abandayo. Kodwa-ke, ngenxa yokuqina okunamandla kwama-molecule omphunga wamanzi kubhavu oshisayo, umusi wamanzi owenziwe nge-shower esishisayo, i-sauna nentwasahlobo eshisayo kulula ukungena engxenyeni engaphakathi yesongo, okuzodala ukuthi umsebenzi wesongo ungakwazi isetshenziswe ezimweni ezibucayi.
Ubufakazi obungenamanzi nomhwamuko imiqondo emibili ehlukene.
Imishini ejwayelekile ayikwazi ukuvikela umhwamuko wamanzi ungene, njengokukhangisa okujwayelekile okungamamitha angama-30 okutshuza okungangeni manzi kubhavu oshisayo kusenamathuba okuba nomhwamuko wamanzi. Kuyadingeka futhi ukunaka ukubhukuda, uma ukuntywila neminye imisebenzi kusazoba nengozi yamanzi, futhi uma ukubhukuda olwandle, ngenxa yamanzi olwandle abhebhethekayo kulula ukudala ukugqwala koxhumana nabo bokushaja, ukufaka indandatho yerabha futhi okunye ukuguga okusheshayo, nokusebenza okungangenwa ngamanzi kwemishini akuhlali unomphela, kungahle kube buthakathaka njengoba isikhathi sihamba. Akunandaba ukuthi isongo le-smart lingenamanzi kangakanani, akufanele lisetshenziswe ngaphansi kwamanzi isikhathi eside kakhulu. Isongo elihlakaniphile lihlala lingumkhiqizo ohlakaniphile we-elekthronikhi. Akunandaba ukuthi liphezulu kangakanani ibanga elingenamanzi lesongo elihlakaniphile, uma ulisebenzisa ngaphansi kwamanzi ngaso sonke isikhathi, kuzoba nomzuzwana wamanzi ngengozi. Ngakho-ke, ukuwashwa kwezandla nsuku zonke, ukugeza okubandayo, usuku olunemvula, ukujuluka kungagqokwa, akunconywa ukugqoka okugeza okushisayo noma ukuxhumana namanzi isikhathi eside, ukuze unwebe impilo yensizakalo yemikhiqizo egqokekayo ehlakaniphile. Ngaphezu kwalokho, imishini iyawa, ihlehle noma ibhekane neminye imithelela, ukuthintana namanzi ensipho, i-gel yokugeza, okokuhlanza, amakha, i-lotion, uwoyela nakho kuzothinta ukumelana kwamanzi nesongo.